Autotarget: Igwe akparamagwa nke Azụmaahịa maka Email | Martech Zone
Autotarget: Injin Azụmaahịa Akpado maka Email
Monday, November 17, 2008 Wednesday, February 10, 2016 Douglas Karr
Ahịa ahịa bụ ihe niile gbasara agwa omume, onu ogugu mmadu na ime amụma nchịkọta n'atụmanya gị iji zụrụ ha ahịa karịa. Edere m atụmatụ ngwaahịa n'ezie afọ ole na ole gara aga na ọnụ ọgụgụ Akara ndị debanyere aha email dabere na omume ha. Nke a ga - enyere ndị na - ere ahia aka ka ha kee ndị na - edebanye aha ha dabere na onye kacha rụọ ọrụ.
Site na ndenye aha na omume, ndị ahịa nwere ike belata izipu ozi, ma ọ bụ nwalee ozi dị iche iche, nye ndị debanyere aha ndị na-emepeghị, pịa-site, ma ọ bụ zụta (ntụgharị) site na email. Ọ ga-enyekwa ndị ahịa ohere ịkwụghachi ụgwọ ma bulie ndị na-edebanye aha ha n'ọrụ. Agaghị anabata atụmatụ ahụ iji tinye ya na ngwaahịa ahụ na ụlọ ọrụ ahụ, mana ụlọ ọrụ ọzọ ebilila n'ọkwa nchekwa data nchekwa data na nkewa nkewa, iPost.
iPost akwalitela ngwa ngwa siri ike na-akpachapụ anya na igwe na usoro ya, akpọrọ Nchekwa onweTM (pịa ka enlarge ihe oyiyi ahụ):
Craig Kerr, iPost's VP of Marketing, enyela ozi ndị a gbasara ngwaahịa a:
Atụmatụ ụgbọ alaTM
Autotarget nke iPost na-enye ndị ahịa ohere imeziwanye mkpọsa mgbasa ozi email site na iji amụma nchịkọta. E gosipụtara Autotarget iji mee ka uru nke mgbasa ozi email bawanye site na opekata mpe pasent 20 yana iji belata mbelata ọnụahịa ma bulie ọnụego emeghe.
Dịka ọmụmaatụ, otu ụlọ ọrụ amụbawo uru ahịa email site na 28%, belata ego, ọbụlagodi n'ahịa a siri ike, site na 40% ma mụbaa ọnụego mmeghe site na 90% mgbe naanị ọnwa ole na ole jiri Autotarget. Autotarget na-ewepu amamịghe ma dochie ya na usoro egosipụtara, akpaghị aka nke na-ahụ na ezitere email ziri ezi nye onye ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị.
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa email na-etu ọnụ maka etu ha si tolite listi email ha. Ha enweela, na ọdịnala, na-agbawa agbawa mgbe ha nwere ike nye ọtụtụ mmadụ na ndepụta email dị ka o kwere mee. Approachzọ a bụ ihe efu nke ihe onwunwe na ụzọ doro anya iji tufuo ndị ahịa: Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ahịa chọrọ ịnata ozi ịntanetị azụmahịa ugboro ugboro, ndị ọzọ na-abịa ngwa ngwa ịlele ozi ịntanetị dị ka spam na onye zitere ya dị ka spammer.
Nchọpụta nyocha ọhụụ pụrụ iche nke Autotarget na-arụsi ọrụ ike maka ndị na-ere ahịa site na iji ozi na-akpaghị aka ha nakọtara gbasara ndị ahịa? omume na ọwa ha niile. Na, ohuru na nsụgharị ha kachasị ọhụrụ, Autotarget na-arụ ọrụ na onye na-eweta ọrụ email ọ bụla (ESP).
Olee otu Autotarget si arụ ọrụ
Autotarget bụ iyi iyi data abụọ na - ebugharị: akpa, email pịa site na pịa omume omume yana, nke abụọ, omume ịzụta ihe. Autotarget na-akpaghị aka ma na-enweta email pịa ma lelee data omume kpọmkwem site n'aka ndị na-eweta ọrụ email nke ụlọ ọrụ ugbu a.
Omume data omume ndị ahịa na-akpaghị aka na-aghọ data arụmọrụ
Autotarget na-enweta data nzaghachi email kwa ụbọchị ma na-egosipụta nke ọma ihe ruru ndị ahịa 125 yana ọnwa 12? trailing data na omume email ha na-agbasa ozi. Ozugbo ndị a guzosiri ike, Autotarget nwere ike izipu ozi email ezubere iche nye ndị debanyere aha dabere na nke ha, na-eme ka ọ dị mma ịzaghachi.
Na-eji usoro egosipụtara gụnyere nyocha RFM
Otu ihe dị mkpa nke ijikọ onwe onye bụ nyocha RFM (Mmetụta nke mmekọrịta ikpeazụ, Oge mkparịta ụka, yana ọnụ ahịa ego nke ndị ahịa). Autotarget bụ azịza email izizi iji kwado ma melite nyocha RFM maka mgbasa ozi ịntanetị n'ịntanetị.
A na-eji nyocha RFM mee ihe na ụwa na-adịghị n'ịntanetị maka ndị na-ekewapụ ndị ahịa n'ime otu dabere na nzaghachi omume ha na ozi ụfọdụ. Uru nke nyocha RFM bụ na egosila na ọ dị ọtụtụ iri afọ iji kọwaa amụma nke ọdịnihu nke ndị ahịa dabere na omume ha gara aga n'ọtụtụ ọwa na omume nke ndị ahịa ndị ọzọ nwere profaịlụ yiri ya.
Kedu ihe mkpụrụ ndụ RFM na-agwa gị gbasara ahịa na mbelata ego
N'uche, ndị ahịa nwere ọnụ ọgụgụ mkpụrụ ndụ RFM kachasị elu na-etinye aka na ika ahụ, ma yikarịrị ka ha ga-azaghachi onyinye ma chọọ obere, pere mpe ma ọ bụ, ikekwe, enweghị ego. Ihe osise Autotarget RFM nke iPost na-egosi etu ndị ahịa ole si na RFM zaghachiri n'ezie (nke a pịrị, pịa, ma zụta) na ụdị ozi ọ bụla ahọpụtara. Iji data a, ndị ahịa nwere ike ịmepụta ngwa ngwa na ngwa ngwa nke ndị ahịa dabere na nzaghachi sel RFM ha maka ọfụma ịgbaso ahịa.
Autotarget na-ewe nkeji 5 iji
Enweghị nyocha ma ọ bụ ụdị dị mkpa, mana ejirila Autotarget kọwaa 100% nke ndị debanyere aha. Ndị ahịa na-ewepụta data oge ọ bụla ha na ozi email na-emekọrịta ma ọ bụ zụta ebe ọ bụla ị kpọtụrụ (weebụsaịtị, POS, ma ọ bụ ebe ịkpọ oku). Na nchịkọta, Autotarget bụ azịza dị ike, mana ọ dị mfe ma dịkwa mfe iji.
Tags: akpakacraig kerromume ndị ahịaemail ezubere icheugboroọnọdụọkụịlaghachi azụrmNyocha rfm
Ileba Anya N’iru nke Mgbasa Ozi vidio
Vidiyo 3 gị nwere ike imeri 50 ″ HDTV